Mac OS X - ndinobva kuMac | Ini ndinobva kuMac (Peji 3)
Mashandisiro aungaita yako iPad sechipiri skrini yeMac uchishandisa Sidecar
Isu tinotsanangura mashandisiro eSidecar kuti uve neyechipiri yekutarisa pane yako Mac yekutenda kune yako iPad, pasina kuita kuisa imwe euro yakawanda
Iyo itsva vhezheni yeSafari Technology Preview yave kuwanikwa
Apple inovhura vhezheni itsva yebrowser yayo Safari Technology Preview inosvika panhamba 103. Iyi vhezheni inowedzera nhau nekuvandudza mukuita
Safari pane macOS 10.15.4 otomatiki anowedzera iCloud mapassword kuChannel
Nyowani vhezheni yeSafari inongowedzera iCloud mapassword kuChannel
Apple inogadziridza Safari ye macOS
Apple yakagadzirisa iyo Safari browser nekugadzira yechitatu-bato makuki akavharirwa zvachose nekutadza.
Inowanikwa macOS Catalina 10.15.4 ine inonakidza nhau. Govera maforodha paICloud, karaoke, Screen Nguva, Netflix ine HDR, kutenga kwese, nezvimwe
Apple inozivisa pane yekuvandudza webhusaiti kuti "Project Catalyst" yave kuwanikwa kune macOS maapp.
Nyora yako vhidhiyo kufona mazuva ano pane yako Mac
Mumazuva ano evazhinji mafoni evhidhiyo zvakakosha kuti uzive maitiro ekuaodha kubva kuMac yako uye nekudaro usarase ruzivo rwezvakataurwa nezvazvo
Maitiro ekubvisa maapplication kubva kune yekugovana menyu pane macOS
Kudzima maapplication ayo anoratidzwa mune yekugovana menyu inzira yakapusa yatinonyora pazasi.
10.15.4th beta ye macOS Catalina 13.4, tvOS 6.2 uye watchOS XNUMX
Apple ichangoburitsa yechitanhatu beta ye macOS Catalina 10.15.4, tvOS 13.4 uye watchOS 6.2 inowanikwa chete kune vanogadzira
macOS 10.16 yaizovandudza sarudzo dzeMessage app
Iyo inotevera vhezheni yeMacOS Catalina 10.16 iyo Apple inofanirwa kuendesa kuWWDC 2020 ichawedzera shanduko zhinji kuApp Messages
TvOS macOS 5 uye 10.15.4 Beta 13.4 yevagadziri
Apple inoburitsa nyowani beta vhezheni kune vanogadzira. Mune ino kesi iyo beta vhezheni 5 ye macOS Catalina uye tvOS
Chinhu chinonakidza icho pamwe iwe chausina kuziva nezve Time Machine pane yako Mac
Isu tese tinoziva kuti Time Machine chii uye chii chainokwanisa, asi pane chinhu chinokubatsira nemagwaro ako akakosha.
Maitiro ekusetazve iyo Launchpad kana isingashande nemazvo
Kuburikidza neLaunchpad, isu tinokwanisa kuwana kune yega yega yega maapplication atakaisa paMac yedu, ...
Nzira yekunzwa yekutanga kurira zvakare paMac
Nzira yekunzwa iyo yekutanga kurira futi paMac.Nemurairo muTerminal unogona kunzwa yakakurumbira Apple bhero zvakare.
Chechipiri betas ye macOS Catalina 10.15.4, watchOS 6.2 uye tvOS 13.4
Apple yakaburitsa yechipiri betas ye macOS Catalina 10.15.4, watchOS 6.2, uye tvOS 13.4. Saka kana iwe uri mugadziri usazeze kugadzirisa.
Kutanga Windows 10X Ongorora bvunzo paMacBook
Kutanga Windows 10X Ongorora bvunzo paMacBook. Anogadzira anotumira pa Twitter kuti isina musono sei Windows 10X inomhanya paMacBook.
Maitiro ekuwedzera mavara epa password kune iyo login screen mu macOS
Kana isu tichida kuti timu yedu ititaurire isu kuti password yekunyorera yechikwata chedu inogona kuvei, saka tinokuratidza matanho aunoteedzera.
"Musoro Pointer" inowanikwa mune nyowani beta yeCatalina: iyo inotora inotevera maziso ako. Dzora iyo inotora nemaziso ako, pasina kubata mbeva kana trackpad.
Safari Techonlogy Preview ikozvino yave kuwanikwa mune yayo zanath vhezheni uye pamwe nazvo kugadzirisa uye mhinduro dzemhosho dzakaonekwa dzakawedzerwa
Iko kunyorera kweMail kwaive nenyaya hombe yekuchengetedza yakagadziriswa neApple mushanduro dzichangoburwa dzeOS yavo
MacOS 1, watchOS 10.15.4, uye tvOS 6.2 beta 13.4 yakaburitswa kune vanogadzira
Masikati beta shanduro dzevanogadzira. Apple inoburitsa yega uye yega yega yekutanga beta shanduro dzeiyo OS
Iko kushushikana kwesudo paMacs kwatogadziriswa
Kunetsekana mu sudo utility iyo inobvumidza chero mushandisi kuve neropafadzo yakaonekwa uye yakagadziriswa neApple
Ikozvino inowanikwa macOS 10.15.3, watchOS 6.1.2, tvOS 13.3.1 uye nezvimwe
Apple inoburitsa dzese nyowani vhezheni dzeMac, iOS, iPadOS watchOS, tvOS, uye kunyangwe iyo HomePod.
Kana iwe uine Mac iwe unofanirwa kungwarira neShlayer Trojan
Shlaye Trojan ndeimwe yeakanyanya kupararira mukati meMacOS system ne30% yeMac yakatapukirwa pasirese, kunyangwe aine makore maviri.
macOS Catalina 10.15.3 Beta 3, inowanikwa
Apple ichangobva kuvhura kurodha pasi uye chete kune vanogadzira beta 3 yeMacOS Catalina 10.15.3 umo pasina nhau dzinotarisirwa.
Safari Technology Preview 99 yakaburitswa zviri pamutemo
Isu tatova neshanduro nyowani yeshanduro yekuyedza Safari Technology Preview inowanikwa, mune ino iri vhezheni 99
Iyo yakasarudzika macOS Wallpaper nemunhu wese akabatanidzwa, kubva kuCheetah kuenda kuCatalina
Yemahara kurodha pasi kusanganiswa kweese Mac mapikicha kubva kuCheetah vhezheni kune yazvino ichangoburwa pane macOS Catalina
Iyo yechipiri vhezheni yeiyo watchOS 6.1.2, tvOS 13.3.1 betas yaburitswa. MacOS 10.15.3
Iyo yechipiri vhezheni ye betas, inosanganisira macOS Cataluna 10.15.3, yave kuwanikwa kurodha pasi kubva kuApple developer Center
Nunura iTunes Chitoro kubva kumumhanzi pane macOS Catalina
Iine macOS Catalina iTunes yakanyangarika kubva kumaMacs edu, asi unogona kununura Chitoro cheTunes nenzira yakapusa. Tinokuratidza sei.
Macs inogona kuve nePro modhi kuburikidza nesoftware
Zvinotaridza kuti Apple inoda kuunza Pro modhi mumaMacs ayo.
Sezvineiwo AppleJeus Malware, yakagadzirirwa macOS, iyo inorwisa macryptocurrency services, yakagadziridzwa kune yakasarudzika uye ine simba vhezheni.
Safari Technology Preview 98 yave kuwanikwa
Iyo nyowani vhezheni yeSafari Technology Preview yave kuwanikwa kurodha pasi uye kumisikidza. Izvo hazvidiwe kuve neyekuvandudza account yeiyi
Mac yedu ine Duramazwi rakazara muhurongwa iyo nguva nenguva inogona kuve yakanaka
Chii chinonzi "Nguva yekuenda" yekarenda
Iyo yekuenda nguva yekuita pane yedu Mac khalendari inogara ichishanda uye inotipa isu inonakidza nzira yekuverenga nzira
Apple ichapa mubairo kune chero munhu anowana bugs mune macOS
Apple nhasi yazivisa zviri pamutemo chiziviso chavakaita pakutanga kwegore rino muLas Vegas. Ichapa mubairo kune avo vanoona matambudziko esoftware zvakare paMacOS
Huwandu hwekutyisidzira maMacs hwakawedzera mu2019
Malware muna 2019 yakawanikwa paMacs yakawedzera zvinoenderana neazvino malwarebytes mushumo
Beta yekutanga ye macOS 10.15.3 uye tvOS 13.3.1 yave kuwanikwa
Isu tinoenderera mberi nemabheka. Vakomana vanobva kuCupertino vangoburitsa beta nyowani yeese masisitimu avanoshandisa ...
Maitiro ekuunza Rima Mode kune webhu neSafari
Tinokuratidza maapplication maviri ayo anoita kuti mawebhusaiti iwe aunoshanyira neSafari aenderane neNight Mode, senge iyo yese system.
Opera nhasi inotangisa zviri pamutemo Opera GX browser yemitambo ye macOS
Opera GX ye macOS ibhurawuza rinotarisana zvakananga nevashandisi vanotamba mitambo paMac
MacOS Catalina 10.15.2 ikozvino yavapo
Iye zvino inowanikwa kurodha pasi kubva kuMac yako, iyo nyowani vhezheni 10.15.2 yeMacOS Catalina nedzimwe nhau dzinonakidza.
MacOS Catalina beta 4 yevagadziri yava kuwanikwa
Iyo beta 4 yeMacOS Catalina 10.15.2 yave kuwanikwa kurodha chete kune vanogadzira vane ruzivo rumwe chete mariri.
Maitiro ekumisikidza default browser iwe yaunoda mu macOS
Tinga tsanangure sei bhurawuza yatinoda nekusarudzika mu macOS. Zvakanaka nhasi tinokuratidza maitiro ekuzviita nenzira yakapusa
Outlook.com ikozvino inogona "kuiswa" pane macOS
Microsoft iri kuyedza, pamwe nekubudirira, kuti Outlook inogona kuiswa pane macOS uchishandisa izvo zvinonzi zvinofambira mberi webhu kunyorera
Chengetedza macOS Catalina extensions
Nyore gadzirisa macOS Catalina ekuwedzera kubva kuSystem Preferences.
Safari Technology Preview inosvika vhezheni 96
KuApple ivo vanoramba vachivhura vhezheni itsva dzeyavo yekuyedza bhurawuza Safari Technology Preview. Isu tatova muchikamu 96
Iyo yechitatu beta ye macOS Catalina 10.15.2 yave kuwanikwa
Apple yakaburitsa yechitatu beta ye macOS Catalina 10.15.2 inowanikwa kune vanogadzira. Unogona kuikanda semazuva ese nekutsvaga iyi yekuvandudza
MacOS Catalina 2 beta 10.15.2 yakaburitswa
Iyo beta 2 ye macOS 10.15.2 yave kuwanikwa, inotarisa mukugadzirisa zvikanganiso zvisiri zvishoma muCatalina
Tsamba ine dambudziko rekuchengetedza uye Apple iri kutoshanda kugadzirisa
Apple inozivisa zviri pamutemo kuti ine chikanganiso chekuchengetedzeka mukushandisa kweMail pane macOS Catalina uye macOS Mojave. Vanoshanda pairi kuti vazvigadzirise
Bhugi yaonekwa, iyo inokanganisa vanhu vashoma, zvinoreva kuti maemail ari kuchengetedzwa pasina encryption. Apple iri kutoshanda pane mhinduro.
Yangu Mac haizovhara pasi neMacOS Catalina
Iwe une dambudziko kudzima Mac yako? Idzi sarudzo dzinogona kugadzirisa dambudziko mushanduro nyowani ye macOS Catalina
Iyo yekutanga beta ye macOS Catalina 10.15.2 mumaoko evanogadzira
Zvakajairika kana iwe ukaona iyo "Dhata" disk mune macOS Catalina.
Na macOS Catalina, Apple yakaunza nzira nyowani yekuchengetedza data remakomputa nekugadzira yechipiri yakavanzwa disk inonzi "data"
Safari Technology Preview inoburitsa vhezheni 95
Apple inoburitsa vhezheni 95 yayo yekuyedza Safari Technology Preview browser.
macOS Catalina 10.15.1 uye watchOS 6.1 ikozvino inowanika kune wese munhu
Iyo nyowani vhezheni ye macOS Catalina 10.15.1 uye watchOS 6.1 ikozvino inowanika kune vese vashandisi
Aya ndiwo matambudziko ese ari kugadzirwa neMacOS Catalina
Usati waisa macOS Catalina, verenga chinyorwa ichi uye wozofunga kana uchienderera mberi. Isu tinotsanangura matambudziko akaonekwa kusvika ikozvino.
macOS zvakare inokuzivisa iwe kuKeKKit zvinyorwa paImba
Kugadziridzwa kwemidziyo yeKeKKit kunoonekwa paMac ine macOS Catalina iyo isina kuoneka kare
MacOS Catalina iri kukonzera matambudziko kune vashoma vashandisi izvo zviri kuita kuti maMacs ashanduke ave akanaka mapepa ekutsika
Apple inoburitsa macOS Catalina 10.15.1 beta 3 yevagadziri
Iyo itsva vhezheni ye macOS Catalina yatove mumawoko evanogadzira. Mune ino kesi macOS 10.15.1 beta 3
Yekuzvarwa manotsi kunyorera mu macOS Catalina inowedzera yakanaka mashoma emabasa matsva ayo ari chokwadi kuve anobatsira muzuva rako zuva nezuva.
MacOS Catalina 10.15 yekuchengetedza kugadzirisa asi kwete kune wese munhu
Apple yakaburitsa vhezheni nyowani ye macOS Catalina mairi iyo inowedzera kushushikana kana uchiisa iyi nyowani OS
Bvisa anotumira uye mbeveve tambo mune macOS Catalina Mail
Akawanda mabasa matsva mune yechinyakare macOS Catalina kunyorera, Tsamba. Pakati pavo zvimwe zvinonakidza senge sarudzo yekuvharira mutumwa.
MacOS Catalina yechipiri beta yevagadziri
Yechipiri beta vhezheni ye macOS Catalina 10.15.1 yave kuwanikwa kune vanogadzira. Iyi vhezheni inogadzirisa mabugs uye inovandudza kugadzikana.
Apple inoburitsa vhezheni 94 yeSafari Technology Preview
Iye zvino yave kuwanikwa kurodha pasi vhezheni itsva 94 yeyekuyedza browser yeMac, Safari Technology Preview
Nyowani vhezheni ye macOS Catalina ine bug fix
Iyo nyowani vhezheni ye macOS Catalina yakatangwa ne bug fixes uye mhinduro kumatambudziko akaonekwa muhurongwa
MacOS Catalina zvakare ine matambudziko nemamwe eGPUs
macOS Catalina inoramba ichikonzera matambudziko kune vamwe vashandisi. Mamwe eGPUs akawanikwa asiri kufambidzana zvakanaka neiyo nyowani yekushandisa system
Mail app ine nyaya ne macOS Catalina
macOS Catalina iri kukonzera matambudziko muApplication application, kusvika padanho rekukuyambira kuti usagadzirise, kana iri rako turu tsamba.
Mifananidzo muMacOS Catalina 10.15 inoratidza matambudziko kana uchigadzirisa mifananidzo
Mifananidzo muMacOS Catalina 10.15 inoratidza matambudziko kana uchigadzirisa mifananidzo, dambudziko risingaoneke pane mamwe maApple maApp.
Iyo yekutanga beta ye macOS Catalina 10.15.1 yave kuwanikwa
Kana iwe uri mugadziri, iwe uchitova neyako yekutanga beta ye macOS Catalina 10.15.1 inowanikwa nenhau dzakaringana kuiisa
Ini ndinodzosera sei yangu iPhone mune macOS Catalina?
Isu tinokuratidza nzira yauchazodzoreredza kana kuita backup makopi pane iyo iPhone kana iOS chishandiso kubva kuMacOS Catalina
Iyo Mac haina kuenda kupfuura kugadzirisa iyo Mac kana ichiisa Catalina
Kana iyo Mac yapedza iyo yekumisikidza maitiro eiyo nyowani macOS Catalina uye inoramba iri muchiitiko che "Kumisikidza iyo Mac .."
Parizvino iyo macOS Mojave vhezheni ichiripo kuti igadzire inosimudza uye dzokera kune yapfuura OS kuitira kana uine matambudziko neCatalina
Mushure mekuvandudza macOS Catalina iwe unogona kuona iyo Yakagadziriswa Zvinhu folda pane yako Mac desktop, izvi zvakajairika
Adobe inosimbisa kunonoka pane macOS Catalina inoenderana yekugadzirisa
Vashandisi vanoshandisa iyo Adobe Photoshop uye Lightroom maturusi zviri nani kubva vakamirira kugadzirisa kuti vaise macOS Catalina
Matambudziko ekuisa maapplication kubva iPad kuenda kuMac zvinogumbura vanogadzira
Parizvino zvinoita sekunge iro basa rinokutendera iwe kushandura maapplication ePad kuita Mac, Catalyst, hainyatso kupa mhedzisiro yekukurumidza iyo Apple yakavimbisa mune yayo mharidzo.
Ungade here kukwanisa kudzora Mac yako nezwi rako? NaMacOS Catalina uye nezwi rayo idzva kudzora ikozvino zvave kuita kupfuura nakare kose.
Iko kugona kugovera maforodha paICloud hakuzosvika kusvika 2020
Iko mukana wekugovana maforodha kuburikidza neICloud, inotambura kunonoka kutsva uye haizowanikwe kusvika gore ra2020
Nakidzwa nebasa rekubvumidza neApple Watch pane macOS Catalina
Basa racho rinotendera neApple Watch mu macOS Catalina inotipa imwe yekumhanyisa kana tichifanirwa kutaipa mapassword paMac.
Faira rakadzimwa mu macOS Catalina inogona kunge iri dambudziko kune maDJ
Zvinotaridza kuti vashandisi vanoshanda nemumhanzi kana kuushandisa kushanda kubva kuTunes vanofanirwa kugara kure neyatsva macOS Catalina
Sidecar, basa rinokutendera iwe kushandisa iyo iPad seyechipiri skrini
Sidecar mu macOS Catalina inotibvumidza kushandisa iyo iPad seyakajeka piritsi uye zvimwe zvakawanda sarudzo
Yakagovaniswa maforodha muICloud Drive uye kudzoreredza kubva pane snapshot muMacOS Catalina
Iyo nyowani vhezheni ye macOS Catalina iri padhuze nekona uye inguva yekubata nenhau dzeiyi nyowani OS
Mac Catalyst inosvika ne macOS Catalina. Chii chaizvo ichi?
Mac catalyst inosvika mune itsva vhezheni ye macOS Catalina. Iri basa rinotibvumidza isu kushandisa iOS maapps pane edu Macs
Apple yakaburitsa zviri pamutemo macOS Catalina 10.15 nhasi!
Apple ichangobva kuburitsa yepamutemo vhezheni ye macOS Catalina kune vese vashandisi. Usamirira zvakare uye dhawunorodha vhezheni iyi nekukurumidza sezvazvinogona paMac yako
Iyo nyowani macOS Catalina iri padyo, aya ndiwo anowirirana maMacs
Urwu ndirwo runyorwa rwemakomputa anoenderana neiyo nyowani macOS Catalina iri kuda kuvhurwa zviri pamutemo
Logic Pro X inogona kusashanda zvakanaka neMacOS Catalina.
Ukuda kuisa MacOS Catalina kuyedza kuti Logic Pro X inoshanda sei? Iwe zvirinani kumirira kana iwe usingade pasina yako aunofarira mabasa.
Apple inotangisa macOS Catalina GM yevagadziri
Vagadziri vatove neGolden Master vhezheni ye macOS Catalina yavanayo. Iyi ndiyo pre-yekupedzisira vhezheni, saka isu tiri padyo
Safari Technology Preview 93 yakagadzirira kurodha pasi
Iyo itsva Safari Technology Preview 93 yave kuwanikwa kune vese vashandisi vanga vachishandisa iyi yekuyedza browser
Kwidziridzo kana kuisa macOS Catalina nyowani kubva pakutanga?
Panguva ino, kana iko kuvhurwa kwepamutemo kweMac OS nyowani kuchisvika, mubvunzo unodzokororwa: Gadziridza kana kuisa iyo nyowani macOS kubva pakutanga?
Apple inoisa iyo beta 10 vhezheni ye macOS Catalina mumaoko evanogadzira. Iyo yekuvandudza inoita kunge yakanangana nekusimba uye chengetedzo yesystem
Dhawunirodha iwo matsva manomwe emadziro e macOS Catalina
Kana iwe uchida kurodha pasi macOS Catalina wallpapers, iwe unogona kuzviita mukugadzirisa kwavo kwekutanga kuburikidza nechinyorwa chino.
Ehe, Mifananidzo muMacOS Catalina ichave neyakafanana yakafanana neIOS 13
Iyo nyowani Mifananidzo app muMacOS Catalina inoratidzira chaiyo nyowani interface. Iye zvino kuona edu mafoto kuri nani kwazvo
An Apple Arcade Zuva Rinozivisa Zvinogoneka MacOS Catalina Kuburitswa Zuva
Apple inogona kuvhura macOS Catalina Chishanu chinotevera, Gumiguru 4 kana kunyangwe pamberi pekuzadzikiswa kwezvavakaisa pawebhusaiti yavo muDenmark
Apple inoburitsa macOS Mojave 10.14.6 uye watchOS 5.3.2 yezvigadzirwa zvekare
Apple inoburitsa vhezheni nyowani ye macOS Mojave, iOS uye watchOS 5.3.2 kugadzirisa mamwe madudu uye matambudziko ekuchengetedza
Mhoro kune wechitatu-bato kuwedzeredza muSafari 13
Kuwedzeredzwa muSafari 13 kwave kurambidzwa neApple uye izvi zviri kukonzera mamwe kutemwa nemusoro kwevamwe vashandisi vebrowser
Iyo bhurawuza nyowani Safari 13 yave kuwanikwa kurodha pasi uye zvinoita sekunge haisi kushanda zvakanaka kune vese vashandisi
Ivo vanogadzirisazve muvhidhiyo iwo mapepuru eshanduro dzazvino dzeMacOS
Iine yega yega vhezheni yemacOS, Apple inotishamisa ine Wallpaper yakafuridzirwa nezita re ...
Mapikicha matsva mune 8th beta ye macOS Catalina
Mapikicha matsva mune 8th beta ye macOS Catalina, mune yepamusoro resolution fomati. Tichaonawo akateedzana emifananidzo pane desktop.
Iyo nyowani app certification ye macOS Catalina yakanonoka kusvika munaNdira 2020
Apple inodzora iko kunyorera notary maitiro mu macOS 10.15 Catalina kusvika Ndira 2020
Maitiro ekutenderedza mifananidzo usingashandise Ratidziro
Kutenderera mifananidzo muKutsvaga kuri nyore kwazvo paMac kana tisingade kushandisa Preview. Tinokuratidza nzira mbiri dzinokurumidza uye dziri nyore kuzviita.
macOS, tvOS, uye watchOS inogamuchira yekuwedzera yekuvandudza
Apple ichangobva kuburitsa nyowani nyowani kugadzirisa madiki mashandiro uye mashandiro nyaya paApple Macs.
Iye zvino inowanikwa kurodha pasi Safari Technology Preview 90
Apple inoisa vhezheni 90 yeiyo yekuyedza Safari Technology Preview browser mumaoko evashandisi vese.
MacOS Catalina beta 6 inowedzera zvidhori zvitsva kuKeKKit
MacOS Catalina beta 6 inosvitsa matsva matsva muKeKKit yemarambi, plugs uye mafeni. Iko kushanda kwakasiyana neiyo iOS vhezheni.
Apple inoburitsa macOS Catalina beta 6 yevagadziri
Apple inoburitsa macOS Catalina beta 6 yevagadziri. Parizvino hatisi kuwana nhau mune yakagadzikana system.
Offline Dictation ficha inonyangarika kubva ku macOS Catalina betas
Iyo Offline Dictation ficha yaenda kubva ku macOS Catalina betas. Iyo yekupedzisira gakava nezve mushandisi ruzivo inogona kuidzima.
Apple Inoburitsa Safari Technology Preview 89
Iyo yazvino vhezheni yeApple yekuyedza bhurawuza, Safari Technology Preview, yave kuwanikwa uye panguva ino tiri pashanduro 89.
Maitiro ekudzima thumbnail preview yeMac skrini
Kana iwe waneta nekuona thumbnail yekutarisa kwemahwindo iwe waunotora paMac yako, heino maitiro ekuvaremadza.
Apple Inoburitsa Yekuwedzera Yekuvandudza yeMacOS Mojave 10.14.6
Ivo vakomana vanobva kuCupertino vaburitsa inoenderana yekumisikidza ye macOS Mojave 10.14.6 yekugadzirisa matambudziko mamwe maMac pavanomuka kubva kuhope.
Apple inodzorera Sierra uye High Sierra yekuchengetedza yekuvandudza 2019-004
Apple inodzorera iyo Sierra uye Yakakwira Sierra 2019-004 yekuchengetedza yekuvandudza. Iyo yapfuura vhezheni yakabviswa nekuda kwematambudziko nevamwe vashandisi.
Apple Inoburitsa Yekupedzisira Shanduro ye macOS 10.14.6 Mojave
Apple inoburitsa vhezheni yekupedzisira ye macOS 10.14.6 Mojave. Kuti utore pasi, enda kuSystem Preferences, kune iyo Software Gadziriso chikamu.
Akawanda iCloud Bugs Akaonekwa mu macOS Catalina Betas
Akawanda iCloud bugs akaonekwa mune macOS Catalina betas. Iwo matambudziko anokanganisa kufananidza faira uye kugovana.
MacOS Catalina, iOS 3 uye tvOS 13 yeruzhinji beta 13 yava kuwanikwa
Apple inoburitsa beta vhezheni dzeMacOS Catalina, iOS 3 uye tvOS 13. Chinhu chakakosha ndechekuti idzi shanduro dzirambe dzichivandudza OS.
macOS Catalina beta 4 yatove mumawoko evanogadzira
Apple yakaburitsa yechina beta vhezheni ye macOS Catalina yevanogadzira. Iyo inowedzera kugadzirisa mukuchengetedza uye kugadzikana kweiyo system
Apple inoburitsa yechishanu beta ye macOS 10.14.6 Mojave yevagadziri
Chechishanu beta ye macOS 10.14.6 Mojave yevagadziri. Ivo vano tarisa pane kugadzirisa bug uye kugadzirisa kwese kuita.
Maitiro ekuswededza kuti uwedzere mapeji ewebhu muSafari
Kana iwe uchida kugadzirisa maonero eSafari webhu mauri, heino hunyengeri hwekuwedzera uye kudzikisa saizi yayo.
Iyo yazvino macOS Catalina beta inosanganisira nyowani screensaver
Iyo yazvino vhezheni ye macOS Catalina inosanganisira yakanaka screensaver iyo yatinogona kugadzirisa mune mana akasiyana akasiyana.
Iyo yechipiri yeruzhinji beta yeMacOS Catalina uye tvOS yave kuwanikwa
Yechipiri yeruzhinji beta vhezheni ye macOS Catalina, tvOS, uye mamwe ese beta vhezheni zvave kuwanikwa kurodha pasi.
Vagadziri vatove ne beta 3 ye macOS Catalina 10.15, watchOS 6, tvOS 13 uye imwe OS
Beta 3 shanduro dzave kuwanikwa kune vanogadzira. Ino nguva tinosvika beta 3 ye macOS Catalina 10.15, watchOS 6, tvOS nevamwe
Iyo yekushandisa yekuwedzera slots inodzoka mushure mekumiswa kune macOS Catalina
Kutevera kuvhurwa kweiyo nyowani modular Mac Pro, Apple yadzokororazve mashandisiro ayo ekuwedzera masoftware nemakadhi ePCI neyechipiri beta ye macOS Catalina.
Kusvika ku8 Isingazivikanwe AMD Radeon Graphics Inowanikwa mune Yechipiri Beta yeMacOS Catalina
Kusvikira ku8 isingazivikanwe AMD Radeon mifananidzo inoonekwa mune yechipiri beta ye macOS Catalina. Ivo vanozoonekwa zvechokwadi paMacs e2019 uye 2020
Safari Technology Preview 86 yave kuwanikwa
Iyo yazvino vhezheni yeSafari Technology Preview yave kuwanikwa kurodha pasi uye inosvika vhezheni 86.
Maitiro ekudzivirira Safari kubva otomatiki kuvhura mafaera atinotora
Kana iwe wakaneta nekuvhara windows iyo macOS inovhura pese patinotora faira kuburikidza neSafari, tinokuratidza maitiro ekudzivirira kuti varege kuvhurwa
macOS Catalina haipe rutsigiro kune akawanda iTunes maraibhurari
Pamamwe mabheti maviri aripo nhasi eMacOS Catalina, hapana kana iwo anotibvumidza kuwana mararaibhurari akasiyana atakange tagadzira muTunes.
Humwe humwe humbowo hwekuti Google Chrome ndiyo yakaipisisa yeMac
Kana Yekupedzisira Kucheka iri kusangana nemashandiro kana nyaya dzekushanda, chinhu chakanakisa kuita kurega kushandisa Google Chrome, sezvo iri iyo mhosva
Maitiro ekuisa yekutanga yeruzhinji beta yeMacOS Catalina 10.15
Tinokuratidza maitiro ekuisa macOS Catalina pane yako Mac nyore uye nekukurumidza. Mune ino kesi yeruzhinji beta 1 yeApple OS
Beta yekutanga yeruzhinji yeMacOS Catalina yave kuwanikwa
Isu tatova nemhando dzakasiyana dzeveruzhinji beta dzeMacOS Catalina, iOS 13, iPadOS inowanikwa kune vashandisi.
MacOS Catalina yaizosanganisira vhezheni dzakashandurwa kuProjekti Catalyst yeMessage uye Shortcuts
Iine macOS Catalina, iwo mameseji uye mapfupi maficha aizouya pasi peProjekti Catalyst rutsigiro, inozove yepasirese pamwe neiyo iPadOS.
Sidecar Inoenderana Mac Mac Models
Kana iwe usingazive kana Mac yako ichienderana nebasa reSidecar, pazasi isu tinokuratidza ese mamodheru anoenderana neiri nyowani basa.
Aspyr inozivisa kupera kwe32-bit mutambo wemacOS
Aspyr inosimbisa kupera kwemitambo yayo ye32-bit ye ​​macOS Catalina uye ivo vanozotsiviwa uye kuvandudzwa isati yatanga zviri pamutemo iyo nyowani macOS
Apple inodzora kupinda kuApple Store Online kune nyowani shanduro dzeMacOS neSafari
Kana iwe uchigara uchiwana iyo Apple Chitoro online neyakare Mac, unogona kumanikidzwa kuivandudza nekuda kweiyo Apple mvumo
Nyowani vhezheni yeSafari Technology Preview, ino nguva 85
Apple inotangisa vhezheni nyowani yekuyedza Safari Technology Preview browser, ino inguva 85 uye isina kumirira vhiki mbiri pakati pekutanga.
Mapfupi ekhibhodi ekugadzirisa iyo Dock nekukurumidza
Kana iwe uchiwanzoshanda neMac yako Dock, zvingangoita kuti mapfupi atinokuratidza mune ino chinyorwa anobatsira kwazvo.
Apple inoburitsa inogadziridza maMacs neFusion Drive kugadzirisa matambudziko neBoot Camp
Dai iwe wanga uchisangana neBoot Camp nyaya pakombuta yako neFusion Drive, Apple yakaburitsa inogadziridza inogadzirisa nyaya
Dhawunirodha pano iyo nyowani macOS Catalina mifananidzo
Aya ndiwo matatu matsva emadziro e macOS Catalina. Unogona kudhawunirodha mahara kushandisa paMac yako
Maitiro ekusaina zvinyorwa mu macOS Catalina
Isu tinokuratidza maitiro ekusaina zvinyorwa mu macOS Catalina pane Mac kubva kune yako iOS kifaa
Nhau dzeMail application iyo inosvika neMacOS Catalina
Kunyangwe paine pasina akawanda matsva maficha muMail muMacOS Catalina, mamwe acho anogona kukubvumidza kuti uishandise zvakare.
Luna Ratidza Vanotangisa Vanoti Vacharamba Vachishanda Mukuvandudza Chigadzirwa Chavo
Iyo nyowani Sidecar chimiro mune macOS kwave kuri kurova kune vagadziri veLuna Ratidza, avo vanoti vacharamba vachishanda pane yavo chigadzirwa.
Safari Technology Preview inosvika vhezheni 84
Apple inoburitsa vhezheni itsva yeyekuyedza bhurawuza Safari Technology Preview. Mune ino kesi vhezheni 84 inosvika
Wakaoneka Dashibhodhi. Apple inoibvisa kubva macOS Catalina
Iyo nyowani vhezheni ye macOS Catalina inomhanya kunze kweDashboard. Mune yekutanga beta vhezheni inomhanya kunze kweiyi kushanda
Purojekiti Catalyst, shandisa iPad maapp paMac yako
Apple inowedzera Project Catalyst kune macOS Catalina, chinova chinhu chinopfuura chinozivikanwa Marzipan. Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kushandisa maappaapps paMac
Kuwanikwa uye Kuchengeteka, maviri akakosha ekuvandudza mu macOS Catalina
Apple inovandudza kuwanikwa nekuchengeteka, iine shanduko dzakakosha mushanduro nyowani yeMacOS Catalina
Aya ndiwo maMac anoenderana neiyo nyowani macOS 10.15 Catalina
Isu tinokusiya iwe izere runyorwa rweMacs ayo anowirirana neMacOS Catalina
Apple pakupedzisira inopa macOS 10.15 Catalina zviri pamutemo
Apple yakazivisa zviri pamutemo macOS 10.15 Catalina kuWWDC 2019 nekuparara kweTunes, kusangana kwakawanda neIOS uye iPadOS, nezvimwe.
Safari Technology Preview 83 yave kuwanikwa kurodha pasi
Apple inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi vhezheni 83 yayo yekuyedza bhurawuza Safari Technology Preview 83
Aya ndiwo mamwe emazita anorira macOS 10.15
Mazita mana anowanikwa pawebhu semazita anobvira eiyo inotevera vhezheni yeMacOS. WWDC iri padyo uye tichakurumidza kuona kana tichiiwana nemazvo kana kwete
Maitiro ekumisikidza Usakanganise nekhibhodi nzira
Activate iyo Do not disturb mode iri nyore kwazvo uye nekukurumidza kuita kuburikidza nekhibhodi nzira iyo yatinokuratidza pazasi.
Sezvazvakaita nemamwe ese ma beta shanduro dzeOS dzakasiyana dzakatangwa masikati ano, kuApple ...
Iwe unogona ikozvino kuyedza Microsoft Edge (dev) pane yako Mac
Edza iyo yekuvandudza vhezheni yeiyo nyowani Microsoft Edge browser pane yako Mac. Iyo yemahara uye iwe unogona kuiisa izvozvi
Nyowani vhezheni yeSafari Technology Preview ikozvino yavapo
Apple yakaburitsa vhezheni 81 yeiyo yekuyedza Safari Technology Preview browser. Mune ino vhezheni nyowani inoenderana bug fixes inowedzerwa
Maitiro ekumisikidza kubatana kweBluetooth kweMac yedu isina trackpad kana mbeva
Pazasi isu tinokuratidza maitiro atingaite ekumisikidza iyo bhuruu kubatana kwemidziyo yedu tisingashandise mbeva kana trackpad
Pfungwa yekuti "Airtime" inogona sei kuve mune macOS 10.15
Jacob Grozian anotiratidza zano rekuti Nguva yekushandisa basa ingave sei kumaMacs edu nekuuya kwemacOS 10.15
Apple Inoburitsa Yechitatu Veruzhinji Betas ye macOS 10.14.5 uye tvOS 12.3
Yechitatu yeruzhinji macOS uye tvOS betas izvozvi zvave kuwanikwa kurodha pasi.
Iyo yechitatu beta ye macOS 10.14.5, tvOS 12.3 uye watchOS 5.2.1 ikozvino inowanika kune vanogadzira
Apple maseva akaiswa mukushandisa kuvhura mabheta eayo ese mashandiro masisitimu, kutanga ne macOS Mojave 10.14.5
Makore matatu kubvira Apple payakachinja OS X kuva macOS
Apple yanga ichishandisa zita rekuti macOS kwemakore matatu pamberi pezita reMac inoshanda sisitimu
Chii chakaenzana neWindows F5 paMac
Basa rinozivikanwa F5 kurodha patsva peji rewebhu muWindows, zvine mutsindo rine rakaenzana muMac.Tinokuratidza zvazviri uye mashandiro aro.
Vakomana vanobva kuCupertino vangoburitsa yechipiri yeruzhinji beta ye macOS 10.14.5, beta inouya pamwe neTVOS 12.3 NAIOS 12.3.
Safari Technology Preview 79 yave kuwanikwa
Apple Inoburitsa Vhezheni 79 ye Safari Technology Preview Vashandisi
Apple inoita macOS Mojave 1 beta 10.14.5 iwanikwe kune vanogadzira
Apple inosunungura zviri pamutemo macOS 10.14.4
Isu ikozvino tave kurodha pasi yazvino vhezheni yemacOS 10.14.4 inowanikwa kune vese vashandisi
Safari Technology Preview 78 yave kuwanikwa
Apple inotangisa shanduro nyowani yeSafari Technology Preview mune ino kesi isu takatarisana neshanduro 78
MacOS Mojave 10.14.4 beta yevanogadzira
MacOS Mojave 10.14.4 beta vhezheni XNUMX yave kuwanikwa kune vanogadzira
Safari Technology Preview 77 yave kuwanikwa
Iyo yekuyedza bhurawuza Safari Technology Preview mune vhezheni 77 yave kuwanikwa kurodha pasi
Apple inoburitsa iyo yechina beta ye macOS Mojave 10.14.4 yevagadziri. Kuvandudza kwemashoko akaunzwa mumabheja apfuura
Apple inotangisa shanduro 76 yeSafari Technology Preview 76 yevashandisi.Mune iyi vhezheni, zvikanganiso zvakaonekwa mushanduro dzapfuura zvinogadziriswa
Iyo yechitatu vhezheni ye macOS Mojave, kunyanya vhezheni 10.14.4, yave kuwanikwa kune Apple nharaunda nharaunda.
Kuziva iri vhezheni ye macOS inotungamirwa nechikwata chedu inzira yakapusa yatinonyora muchinyorwa chino.
Maitiro ekutumira mafaera kubva kuMac kwedu kuenda kune iyo iPhone kana iPad kuburikidza neAirDrop
Kana iwe usiri kushandisa iyo AirDrop basa iyo inokutendera iwe kukurumidza kugovana mafaera kubva kune yako iPhone kuenda Mac kana zvinopesana, isu tinokuratidza iwe sei.
Apple Inoburitsa macOS 10.14.3 ine Fix yeGroup FaceTime Inoshevedza
Apple inoburitsa macOS vhezheni 10.14.3 ine gadziriso kuGroup FaceTimen yekufona nyaya
Apple Inoburitsa Safari Technology Preview 75
Isu tatova neitsva vhezheni yeshanduro yekuyedza Safari Technology Preview iyo nguva ino inosvika vhezheni 75
Maitiro ekubvumidza pop-ups muSafari
Pop-ups yakava chinhu chakaipa cheInternet makore mashoma apfuura uye angangoita ese mabhurawuza anovadzivirira natively. Tinokuratidza maitiro ekuvatendera muSafari yeMac
MacOS Mojave 2, iOS 10.14.4 uye tvOS 12.2 yeruzhinji beta 12.2 yave kuwanikwa
Apple inoburitsa vhezheni 2 ye macOS Mojave 10.14.4, iOS 12.2, uye tvOS 12.2 yeruzhinji beta yevashandisi vasina account yekuvandudza
CookieMiner ndiyo malware yazvino yakawanikwa paMac: inobira ruzivo rwebhengi rako uye inotora mukana wesimba rako iwe usingaone
Tsvaga pano CookieMiner, yazvino malware yakawanikwa yeMac inokwanisa kuba dhata rako uye kuitora kushandisa iyo yangu cryptocurrency.
Mhosva yekutanga yekukanganisa kuchengetedzwa kweFaceTime yakangoendeswa mudare muHouston, Texas.
MacOS Mojave 1 Veruzhinji Beta 10.14.4 Ikozvino Inowanikwa
Apple yatanga vhezheni yeruzhinji yeBeta 1 macOS Mojave 10.14.4 nezuro husiku uye ihwo hwese hweruzhinji vhezheni
Safari Technology Preview ikozvino yave kuwanikwa mushanduro 74
Iyo nyowani vhezheni yekuyedza browser yeApple Safari Technolgy Preview inosvika vhezheni 74 neyakajairika mashandiro mukuita kwayo
Chekutanga beta inowanikwa kune vanogadzira macOS Mojave 10.14.4, iOS 12.2, watchOS 5.2 uye tvOS 12.2
Apple ichangoburitsa ese beta 1 shanduro dzeMacOS Mojave 10.14.4, iOS 12.2, watchOS 5.2, uye tvOS 12.2 yevagadziri
MacOS Mojave 10.14.3, iOS 12.1.3, watchOS 5.1.3 uye tvOS 12.1.2 yave kuwanikwa kune wese munhu
Apple yakaburitsa maminetsi mashoma apfuura ese mitsva shanduro dzeMacOS Mojave 10.14.3, iOS 12.1.3, watchOS 5.1.3 uye tvOS 12.1.2 yevashandisi vese
Maitiro ekuvanza yakavhurika kunyorera pane macOS desktop
Pazasi isu tinokuratidza maitiro atingavanze maapplication atakavhura pakombuta yedu nekubatanidzwa kwemakiyi
Maitiro ekugadzirisa mafaira eodha pasina yechitatu-bato maapplication
Kana iwe wakaneta nekugara uchiona iyo imwecheteyo folda mifananidzo pakombuta yako, muchinyorwa chino tinokuratidza maitiro atinga shandure nekukurumidza uye nyore.
MacOS Mojave 4 beta 10.14.3 yevagadziri yava kuwanikwa
Safari Technology Preview 73 yave kuwanikwa
Uye macOS Mojave 3 beta 10.14.3 yevagadziri yakasvika
Maitiro ekuwana izvo zvivakwa zvefaira mune macOS
Muchikamu chino tinokuratidza nzira mbiri dzakasiyana dzekuwana zvivakwa zvemafaira.
Maitiro ekudzikisira dock pasina kuwana System Zvaunofarira
Kugadziridza saizi yedoko mu macOS inzira yakapusa yatinogona kuita tisinga svike paKuda kweSystem chero nguva.
Maitiro ekuwedzera nzira pfupi yewebhu kudoko mu macOS
Kana iwe uchida kukurumidza kuwana iwo mapeji ewebhu iwe aunoshanyira kazhinji kubva kuMac yako, ipapo isu tinokuratidza maitiro ekuwedzera nzira pfupi kudoko
Nyowani beta shanduro dzeMacOS 10.14.3 uye tvOS 12.1.2 yevagadziri
Mashandisiro ekushandisa Reduce Motion ficha kudzima macOS mifananidzo
Kana macOS animations achikutungamira pasi penzira yezvombo, unogona kuzvigadzirisa nekumisikidza iyo Reduce Motion ficha.
Maitiro ekuratidza rese data kubva kuemail musoro mune iyo Mail application
Musoro weemail ruzivo runogona kubatsira zvakanyanya kana tiine matambudziko neemail.
Microsoft Remote Desktop yeMac inovandudzwa nerutsigiro rweMacOS Mojave nzira yakasviba uye nezvimwe
Iyo Microsoft Remote Desktop mutengi yeMac yakagadziridzwa, ichiwedzera rutsigiro rweMacOS Mojave yerima modhi uye nezvimwe. Tsvaga!
Safari Technology Preview 71 yave kuwanikwa
Apple inoburitsa macOS 10.14.2 yevashandisi vese
macOS 10.14.2 beta 4 yave kuwanikwa kune vanogadzira
Maitiro ekumisikidza iyo Dictation basa uchishandisa nzira pfupi yekhibhodi
Kana iwe uchiwanzoshandisa iyo Yekuraira basa, pazasi isu tinokuratidza maitiro ekuita uye kumisa basa iri uchishandisa nzira yekhibhodi.
Dzidza pano maitiro aunogona kusarudza zvese zvinhu mune dhairekitori kana dhairekitori paMac kamwechete, neyakareruka kiyi musanganiswa.
Maitiro ekuisa iyo AirPrint printa pane macOS
Kutenda kune tekinoroji yeAirPrint, tinogona kudhinda kubva kune chero chishandiso tisina kana kuibatanidza. Nekudaro paMac isu tinofanirwa kuiisa kare.
Maitiro ekufambisa desktops nekukurumidza paMac
Kana iwe uchida kufambisa iwo madhesiki aunogadzira zuva nezuva paMac yako, mune ino chinyorwa tinokuratidza maitiro ekuzviita nekukurumidza uye nyore.
Maitiro ekudzima bhatani reBluetooth rakabatana neMac yedu
Kana iwe wakaneta nekuona kuti iro runyorwa rwebluetooth zvishandiso zvakabatana nekombuta yako rakakura, mune ino chinyorwa tinokuratidza maitiro ekudzikisira nekubvisa iwo ausingachashandisi.
Maitiro ekudzimisa maficha ekushandisa kweDock
Nekuda kwesarudzo dzekumisikidza yeDock, tinogona kudzima mifananidzo yezvidhori zvinoratidzwa patinobaya padziri.
Kana iwe wakaneta nekuvhara Finder hwindo newindo, mune ino chinyorwa tichakuratidza maitiro ekuvavhara ivo pamwe chete.
Apple inoburitsa yechitatu beta ye macOS 10.14.2 yevagadziri
Apple yakaburitsa macOS 3 Mojave beta 10.14.2 yevagadziri, iyo yave kuwanikwa. Tsvaga pano nhau dzayo uye maitiro ekuiisa pane yako Mac.
Kana iwe wakaneta nemeseji yakataurwa iyo inowoneka yega yega yega kana matatu muMacOS High Sierra kugadzirisa kune macOS Mojave, uye iwe usiri kuda kuzviita panguva ino, tinotsanangura kuti tingaibvisa sei.
Gadzira kumashure kweiyo Mac yako terminal yakajeka kwazvo
Tsvaga pano maitiro aungaita iyo yekumberi kweiyo terminal hwindo paMac yakajeka, kuburitsa zviri kumashure kwayo.
Maitiro ekudzima mafaera akananga paMac yedu pasina kudzima kusimbiswa
Kana iwe wakaneta nesimbiso meseji iyo macOS inotiratidza patinodzima mafaera, isu tinokuratidza iwe hunyengeri hudiki kuti uzvidzivise.
Maitiro ekubuda kunze kweICloud pane yedu Mac
Kana iwe uchironga kutengesa yako Mac, iwe unogona kuve unofarira kuziva kuti ungabvisa sei rese data rine chekuita neyako iCloud account.
MacBook Air 2018 inogamuchira yakasarudzika macOS Mojave kugadzirisa
Apple yakaburitsa itsva yakasarudzika yekuvandudza yeMacBook Air nyowani kubva macOS 10.14.0
Safari Technology Preview inosvika vhezheni 69 ine akati wandei maficha
Apple yakatoburitsa beta 2 ye macOS 10.14.2 yevagadziri, sezviri pachena pasina nhau zhinji, sezvo zvakatoitika nebeta rapfuura. Tsvaga!
Maitiro ekugonesa kana kudzima iyo Dashibhodhi mu macOS Mojave
Kunyangwe nenyaya yekuti iri shoma uye shoma ishandiswa, iyo Dashibhodhi ichiri kuwanikwa muMacOS Mojave. Muchikamu chino tinokuratidza maitirwo azvo.
Maitiro ekugonesa kana kudzima otomatiki maapuro ekushandisa mune macOS Mojave
Tsvaga apa maitiro aunga gonesa kana kudzima otomatiki maapuro kubva kuApp Store mu macOS Mojave zvinoenderana nezvaunoda.
Ungachinja sei ruvara runoonekwa kana iwe uchidhinda chiratidzo muMacOS Mojave
Tsvaga apa maitiro aungaita nyore shandura iwo musiyano ruvara uye wedzera ruvara paMac yako kana uchitova ne macOS Mojave yakaiswa.
Vagadziri ikozvino vane macOS Mojave 1 beta 10.14.2
Vakomana vanobva kuCupertino vaburitsa beta rechitanhatu reiyo ichave inotevera yekuvandudza macOS Mojave vhezheni 10.14.1
Maitiro ekuratidzira mawebhusaiti mifananidzo muSafari neMacOS Mojave
Tsvaga pano kuti ungaita sei kuti mifananidzo iratidze paSafari tabo kana uchishanyira akawanda mawebhusaiti muMacOS Mojave.
Apple inoburitsa vhezheni 68 yeSafari Technology Preview
Vagadziri ikozvino vane macOS 5 beta 10.14.1 mumaoko avo
Dzokera ku macOS High Sierra kubva ku macOS Mojave. Isu tinokuratidza maitiro ekurodha pasi sisitimu yekushandisa uye nzira dzekudzokera ku macOS High Sierra
Natsiridza kugadzirwa kwako pamwe nekuenderera mberi protocol pakati peMacOS neIOS
Aya ndiwo mashandiro ekuenderera kweprotocol pakati peMacOS neIOS
Apple inoburitsa macOS Mojave 10.14.1 beta 4 yevagadziri
Safari Technology Preview vhezheni 67 yave kuwanikwa
Maitiro ekuona iyo EXIF ​​dhata muMifananidzo yeMac maapp
Iyo yemuno macOS application, Mifananidzo, inotibvumidza isu kuziva metadata yemifananidzo pasina kushandisa yechitatu-bato kunyorera.
macOS Mojave 10.14.1, tvOS 12.1 uye watchOS 5.1 beta 2 izvozvi zviri mumaoko evanogadzira
Zvino zvatave neKeKKit paMac yedu tichaenda kunoona akati wandei zvigadzirwa zvakadzikiswa
Safari inotora hanya zvishoma nezve kuvanzika kwedu mu macOS Mojave
Maitiro ekusiya iyo macOS Mojave beta chirongwa
Kana iwe wakaneta nekuisa nyowani MacOS Mojave beta vhiki rega rega, heino maitiro atinga regedze chirongwa che beta paMac yako.
Iwe une yakasviba modhi inoshanda mune macOS Mojave? [Poll]
Muchikamu chino tinokuratidza maitiro atingaite ekumisikidza iyo Mabhatiri mashandiro anowanikwa mune macOS Mojave
Kugadziridza kwesystem kwachinja nzvimbo yavo nekuburitswa kweMacOS Mojave uye haigone kuwanikwa muMac App Store.
Maitiro ekumisikidza rima maitiro mune macOS Mojave
Mushure memakore akati wandei ekumirira, iyo yakareba yakamirirwa nzira yakasviba yave kuwanikwa mune nyowani vhezheni ye macOS yeApple makomputa: Mojave. Tinokuratidza maitiro ekuishandisa.
Maitiro ekuisa macOS Mojave kubva kutanga
Aya ndiwo makuru maficha eMacOS Mojave
macOS Mojave makuru maficha
MacOS Mojave yave kuwanikwa kune vese vashandisi
Kana iwe uchida kugona kudzoreredza wechitatu-bato maapps pane yako Mac ne macOS Mojave, heino maitiro aunogona kuzviita.
Vhiki imwe yasara kusvika kuburitswa kweMacOS Mojave
macOS Mojave beta 11, iOS 12 GM, tvOS 12 GM, uye watchOS 5 GM yakaburitswa yevanogadzira
Beta yegumi yeMacOS Mojave yave kuwanikwa
Sezvo vazhinji vedu taitarisira, vakomana veCupertino vakaparura yegumi beta kune vanogadzira izvo ichave inotevera vhezheni yesystem. Chegumi beta yeMacOS Mojave yave kuwanikwa kurodha pasi, kunyangwe panguva ino chete kune vanogadzira.
macOS Mojave iri kurudyi kukona. Maawa mashoma apfuura takaziva zuva rekupedzisira reiyo Apple kiyi yezuva rinotevera 12, kwaunotigadzirisa kana iwe uchida kuva nezvikumbiro zvazvino muMacOS Mojave Dock, uchiwana kubva pane zvaunofarira system. Iyi vhezheni ine zvayakanakira nezvayakaipira
Zvekare isu tine vhezheni inowanikwa yekuvandudza iyo Safari Technology Preview browser, mune ino kesi iri ...
Kana iwe uine MacBook Pro kubva 2018 iwe une yekuvandudza ye macOS High Sierra 10.13.6
Maawa mashoma apfuura, Apple yakatanga vhezheni itsva yevashandisi vane MacBook Pro 2018 ye13 ...
Apple inoburitsa macOS Mojave beta 9 yevagadziri
Maminitsi mashoma apfuura Apple yakaburitsa macOS Mojave beta 9 yevanogadzira. Ichokwadi kune tsika yayo yekuendesa mabheta neMuvhuro, vhiki ino Apple inodzokorora kuburitsa beta 9 yeMacOS Mojave yevanogadzira, vhiki imwe chete mushure mekupedzisira beta. Iyo Goridhe Master inotarisirwa
Hofisi 365 yeMac ichaita kuti iwe uvandudze yako Mac system munguva pfupi
Microsoft yazivisa kuti Hofisi 365 yeMac hofisi suite munguva pfupi inoda kuti makomputa kwaanomhanya ave ...
Maawa mashoma apfuura, Apple yakaburitsa macOS Mojave beta 8 yevanogadzira uye maminetsi gare gare yakaita zvakafanana nevashandisi veMacOS Mojave beta 8 yakaburitswa yevanogadzira nevashandisi veruzhinji beta, zvinoreva kuti vhezheni yekupedzisira yave pedyo.
Safari Technology Preview vhezheni 63 yave kuwanikwa
Yekupedzisira yeshanduro dzinowanikwa dzeSafari Technology Preview iri vhezheni 63 uye maawa mashoma apfuura ...
Wakawana hutsva hutsva mu macOS High Sierra: Synthetic Click
Mushambadzi Patrick Wardle, akazivisa kumusangano wezvekuchengetedza nezve hukuru hutsva hunowanikwa musystem ...
Boka FaceTime mafoni abviswa kubva kubetas dzazvino
Imwe yeshanduko dzinonyanya kukosha dzakawanikwa nevashanduri mushanduro dze beta dzakaburitswa nezuro masikati ...